Assistant Accountant | HBT Co.,Ltd ﻿
Company: HBT Co.,Ltd
•	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၁နှစ် (သို့) ၂နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	LCCI Level -3 ပြီးထားသူဖြစ်ရမည်။
•	Microsoft Excel,Wordနှင့်Internet/Email ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
Work location No.(14),Than Chat Won U Myu St,East Dagon Industrial Zone,East Dagon, Yangon.
Company Industry: Assistant Accountant
•	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။
Assistant Accountant Accountancy Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon HBT Co.,Ltd Accountancy Jobs Accountancy Jobs Assistant Accountant Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Sports World Super World Center